Yoo wardiin fuula baaqqee maxxansamuuf irra baay'ee guddaa ta'e, LibreOffice Calc wardii ammee walqixatti hiruun fuulota baay'ee irratti maxxansa. Waan citni fuulaa ufmaa hoggayyuu qubannoo waaltawaa irraa hin jirreef, tamsa'ina fuulaa mataa keetiin qindeessuu dandeessa.
Gara wardii maxxansamuu deemi.
Argi - Durargii Cita Fuulaa fili.
Tamsa'ina wardii ufmaa fuulota maxxansaa irraa ni argita. Hammangaan maxxansaa ufmaan uumaman sararoota cuquliisaa yabbuun yoo agarsiifaman, kanneen fayyadamaan qindaa'an sararoota cuquliisa haphiin agarsiifamu. Citoonni fuulaa(citoota sararaa fi citoota sarjaa) akka sararoota gurraachaatti mallatteeffamu.
Sararoota cuquliisa hantuuteen deemsisuu dandeessa. Dirqaalaalee biroo baafata haallee keessaa, hammangaa maxxansaa dabalataa dabaluu, sarara harkaa dabalataa guddisuu fi saaguu balleessuu fi citoota sarjaa dabalatee argachuu dandeessa.
Argi - Durargii muraa fuulaa
Title is: Lakkoofsa fuulaa maxxansaaf qindeessuu